ओलीले देश राष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाउँछन्, राष्ट्रपति शासन चल्छ, सेना सडकमा आएर गोली हान्न तयार होला?(भिडियोसहित) « Yoho Khabar
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई चुनावमा लैजान कात्तिक २६ र मंसिर ३ को मिति तय गरेका छन् । तर वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा संसद् पुनःस्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने आँकलन गर्न थालिएको छ । त्यसो भए मुलुक कसरी अगाडी बढ्ला त ?
सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले ओलीलाई साथ दिएर अघि बढेपछि बहालवाला प्रधानमन्त्री एकातिर छन भने पाँच पुर्वप्रधानमन्त्री अर्काेतिर छन् । यद्यपी ओलीको कदम असंवैधानिक र न्यायोचित नभएको भन्दै सोमबार पुर्वप्रधानमन्त्रीसहितका १४६ सांसदहरु सशरीर सर्वाेच्चको ढोका घच्घच्याउन पुगेकाले अब यसको छिनोफानो अदालतले गर्नेछ । तर अहिलेको बस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गरिरहेकाहरु भने संसद् पुनःस्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने बताईरहेका छन् । विश्लेषकहरुका अनुसार संसद् पुनःस्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नभएको अवस्थामा देश राष्ट्रपतिको शासनमा चल्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अनुकुल हुनेगरी राष्ट्रपतिले शासन चलाउन सक्ने र जसको शुरुवात प्रदेश प्रमुख हेरफेरमा राष्ट्रपतिले देखाएको तदाकरुकतालाई लिने सकिने उनीहरुको बुझाई छ । यद्यपी विपक्षीहरु यो स्वीकार्दैनन् । किनकि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भड्कालोमा हालेको देशलाई सर्वाेच्चले लयमा फर्काउने उनीहरुको विश्वास छ ।
कदाचित तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए राष्ट्रपतिले शासन आफ्नो हातमा लिन सक्ने पर्याप्त आधार देखिदैन । राष्ट्रपतिले शासन चलाउन सेनाको सहयोग चाहिन्छ । सेना सम्पूर्ण रुपमा उनका लागि बन्दुक बोकेर विरोधीहरूमाथि गोली प्रहार गर्न तयार भएर सडकमा आउनुपर्छ । तर अहिले नेपाली सेनाबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको छैन । तथापी नेपालको राजनीति न हो, नेताहरु विदेशी र अमुक शक्ति केन्द्रको तालमा नाच्ने भएकाले राष्ट्रपति शासन असम्भव देखिदैन